Ronald Koeman Oo Qirtay In Wijnaldum Ku Jiro Liiskiisa, Xiddigihii Uu Dartood U Eryey Luis Suarez Iyo Tirada Ciyaartoyda Reer Holland Ee Uu Keenayo Camp Nou - Gool24.Net
Ronald Koeman Oo Qirtay In Wijnaldum Ku Jiro Liiskiisa, Xiddigihii Uu Dartood U Eryey Luis Suarez Iyo Tirada Ciyaartoyda Reer Holland Ee Uu Keenayo Camp Nou
Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa markii ugu horreysay qirtay in xiddiga Liverpool ee Georginio Wijnaldum uu ku jiray liiska ciyaartoydii uu doonayay inuu lasoo saxeexdo ka hor intii aanu xidhmin suuqii xagaaga.
Koeman ayaa waqtigaas lasoo wariyey inuu si weyn u doonayay inuu Camp Nou keensado Wijnaldum oo safka hore kaga jiray qorshaha uu doonayay inuu ku ciyaarsiiyo Barcelona, waxaana warar is-khilaafsanaa oo soo baxayay ay marba dhinac u dhigayeen xaaladda labada dhinac.
Wijnaldum ayaa sidoo kale doonayay inuu helo Memphis Depay si uu labadan laacib ee reer Netherlands ee uu kusoo tababaray xulka qaranka uu mar kale ku layliyo kooxdiisa cusub, waxaana labadan ciyaartoyba ay Barcelona ku fashilantay inay lasoo saxeexato.
Tababare Koeman oo warbaahintu weydiisay wixii ka jiray damaciisii Georginio Wijnaldum ayaa si cad u qitay, waxaanu yidhi: ‘Wijnaldum wuxuu ku jiray liiskayga.”
Inkasta oo labadan ciyaartoy ee u dhashay waddanka Netherlands uu saxeexyadooda kusoo guul-darraystay, haddana Koeman wali kama rajo dhigin inuu laacib kale oo waddankiisa ah keeno Barcelona si uu uga garab ciyaaro Frankie de Jong, waxaanu yidhi: “Waxa igu jirta rajada ah inaan kooxdayda keeno ciyaartoy labaad oo Dutch ah.”
Ronald Koeman ayaa la su’aalay haddii uu doonayo in sidii Louis van Gaal uu ciyaartooyo reer Holland ah kasoo buuxiyo Camp Nou, waxaanu ku jawaabay: “Taasi xad-dhaaf bay ahayd. Waxa joogay siddeed ama sagaal ciyaartoy. Hadda waxa aanu haysanaa kaliya De Jong iyo kaddib oo uu Alfred Schreuder ka mid noqday shaqaalahayga tababarka.”
Arrintii dhex martay isaga iyo Lionel Messi iyo sidoo kale Luis Suarez ayaa uu Ronald Koeman ka hadlay, waxaanu yidhi: “Markii aan heshiiska tababarenimada saxeexay ayaan la hadlay Messi. Hore ayaan usii ogaa go’aankiisa laakiin wax waliba way fiicnaadeen dhamaadkii. Waxa uu sameeyey wax kasta oo aan ka filayay tan iyo markii uu sheegay inuu sii joogayo kooxda.”
Xaaladdii adkayd ee Luis Suarez ee keentay bixitaankiisa ayaa uu sidoo kale ka hadlay, waxaanu yidhi: “Anigu wax dhibaato ah kuma qabin Suarez. Kooxda ayaa ku fikirtay inaanu firfircoonaysiino naadiga, waxaanad arki karaysaa inaanu haysano ciyaartoyda sida Ansu Fati, Trincao, Pedri iyo Ronald Araujo.”